၂၀၀၈ ခုနှစ် ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် (စင်ကာပူ) အစီအစဉ်။ | ရွှေမင်းသား
Home » » ၂၀၀၈ ခုနှစ် ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် (စင်ကာပူ) အစီအစဉ်။
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Monday, October 06, 2008
@21 Tyrwhitt Road (Near Jalan Besar Stadium - North Gate) Foochow Building, Singapore 207530.
Click Here for detail map.
Buddha's dhamma says: